Global Voices teny Malagasy » Syria: Hetsika Avotsory i Tariq · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Jolay 2017 5:19 GMT 1	 · Mpanoratra Yazan Badran Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora, Zon'olombelona
Malaza ny bilaogy Syriana amin'izao fotoana izao amin'ny fisian'ny famoretana hafa ataon'ny fitondrana Syriana amin'ny fahalalahana miteny. Saingy ny iray taminay indray tamin'ity indray mitoraka ity. Efa teo amin'ny enim-bolana teo ny raharaha Tariq no nanintona ny sain'ireo bilaogera – enim-bolana, mbola any am-ponja i Tariq.
Nanao aterineto i Tariq Baiasi  indray andro, ary namela fanehoan-kevitra tao amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra, manakiana ny sampam-piarovana malaza. Tsy ela taorian'izany, tamin'ny 7 Jolay 2007, nosamborina tao an-tanàna niaviany ao Banyas izy, ka tsy mbola nahazoam-baovao ny momba azy. Hatramin'ny androany, mbola any am-ponja i Tariq, tsy misy fitsarana, efa mihoatra ny enim-bolana izay.
Nanangana tranonkala fanentanana hamotsorana an'i Tariq  sy fanangonan-tsonia antserasera i Razan sy ny vondrona bilaogera mavitrika. Makà minitra vitsy azafady mba hanao sonia ny fanangonan-tsonia ato . Nanoratra lahatsoratra lavabe  momba ny olana tao amin'ny bilaoginy i Razan, anisan'izany ny resadresaka niarahana tamin'i Razan Zeitouneh, mpikatroka:
Ny fanehoan-kevitr'i Tariq tamin'ny aterineto dia tsy fandikan-dalàna. Raha ny marina, dia nampihatra ny fahalalahany izy, izay araka ny voalaza tetsy aloha, fa voalazan'ny lalàmpanorenana Andininy faha-38, manao hoe: “Ny olom-pirenena tsirairay dia manan-jo haneho ny heviny malalaka sy ampahibemaso, am-bava sy an-tsoratra ary amin'ny fitaovana fanehoan-kevitra hafa rehetra. Manan-jo handray anjara amin'ny dingana fanarahamaso sy maneho tsikera mahasoa mba hiantohana ny fiarovana ny fanarenam-pirenena ihany koa izy. “
Tamin'ny lahatsoratra navoakany, nanonona bilaogera hafa, Tariq Gorani nogadraina sy navela tany am-ponja ihany koa i Razan.
Nogadraina tamin'ny 19-2-2006 nandritra ny herintaona sy efa-bolana talohan'ny nanamelohana azy tamin'ny didim-pitsarana fito taona an-tranomaizina tamin'ny 17-6-2007 i Tariq Gorani noho ny “fampidiran-doza ny fiarovana ao Syria”. Aldomari no anaran'ny bilaoginy , “Aldomari” dia nalaina tany am-boalohany tamin'ny anarana gazety Syriana tsy miankina iray izay niresaka sy nanadihady ny kolikoly ataon'ny manam-pahefana Syriana nandritra ny volana vitsivitsy talohan'ny nanakatonan'ny fitondrana azy (bilaogy).
Nizara ny rohin'ny fanentanana ireo bilagera hafa, ary naneho ny fanohanan'izy ireo. Naneho ny hatezerany  i Abu Kareem ao amin'ny Levantine Dreamhouse :
Tsy hay tohaina ny hatezeran'ny fitondrana Syriana manoloana ny zon'ny olom-pirenena hilaza ny heviny. Azo resahana tanteraka ny fanehoana ny hatezerantsika ao amin'ny aterineto izay tena zava-dehibe. Mahafantatra ny governemanta fa marefo ny mpanohitra voalamina anaty, raha misy. Ankoatra izany, tsy mba mihetsika ireo mpanohitra Syriana any ivelany. Afaka tsy miraharaha ny fanamelohana ataon'ny Tandrefana amin'ny zon'olombelona izy ireo satria fantatr'izy ireo fa toa miahy kokoa ny Syriana sasantsasany ny fahefana Tandrefana rehefa tena ilaina ara-politika izany. Mahafantatra izay bokotra tsindriana hialàna amin'ny teritery ny fitondrana, lalao nataon'ny fitondrana Baathist nandritra ny vanim-potoana taranaka roa izany.
Annie nanoratra momba izany ato , ary i Yazan, ato .
Nilaza  koa i Ahmed hoe:
Satria ampy ny enim-bolana nanagadràna an'i Tariq tany am-ponja mba hahatonga azy ho “mahalala fomba”, miaraka amin'ny “lela fohy kokoa”, sy “tsy hitsabaka amin'ny zavatra rehetra”. Satria nampitahotra sy nampihorohoro anay – amin'ny maha bilaogera sy mpiserasera aterineto- ity fisamborana ity, tsy hanaraka azy izahay, “hafohezinay ny lelanay”, ary tsy hiresaka momba ny lohahevitra fady intsony izahay. Ary satria … AMPY tanteraka ny enim-bolana!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/23/104126/
 tranonkala fanentanana hamotsorana an'i Tariq: http://freetariq.org/en/
 hanao sonia ny fanangonan-tsonia ato: http://freetariq.org/en/sign-our-petition/
 lahatsoratra lavabe: http://ya-ashrafe-nnas.blogspot.com/2008/02/syrian-bloggers-campaign-to-free-fellow.html